AmaShayina ewubheka amasiko abo kazwelonke, ogcina izenzo ngokwesiko phakathi itiye itiye, okwenza le okuyisiko eyodwa ukhumbuleka ngempela. Awukwazi ukusho mayelana abakhileyo Russian - izindlalifa Tula samovars, itiye usetha Saucers, kodwa nya, esikhathini esiningi, indlela yenza itiye in a teapot futhi cishe yonke kwi ukhululekile, kodwa kude akunjalo esihlwabusayo futhi unempilo "itiye uthuli" e izikhwama. Ukuze ufunde indlela yokwenza itiye Pu-erh futhi kuzoxoxwa ngani esihlokweni ababehlose ukuletha okungenani inzuzo okuncane abantu abenqaba "izikhwama" ikuyo yonke indawo futhi wanikeza abakukhethayo kule itiye.
An kuthandwa Puer itiye ukweleta palatability yaso ephezulu izakhiwo ewusizo. Ekhaya, esifundazweni Yunnan (eveni lonkhe ngaphandle okuhlukile) itiye Chinese pu-erh kubhekwa cishe panacea for zonke izifo, ukuze legends ezigoqwe ngokuphulukisa imiphumela yako.
Odokotela bathi ngaphezu umsoco Puer itiye Ithuthukisa kakhulu kwezempilo jikelele, imiphumela yayo nenzuzo asidlulisela ipheshana wokugaya ukudla, eziphathelene nenhliziyo nezinye izinhlelo umzimba. Ngaphezu kwalokho, itiye pu-erh - esihle (mnene futhi kumnandi kakhulu) kusho ngokuhlanza igazi isibindi (okukhiphayo izinto eziyingozi futhi ubuthi), uhlelo genitourinary. Ngaphezu kwalokho, le ndlela yokuvimbela ekuvimbeleni isifo sokuqina kwemithambo yegazi, isivikelo emisebeni eyingozi, ukuthuthukisa isisindo ukunciphisa, utshwala ukuhoxiswa syndrome, ngcono isimo sesikhumba nokuningi. Vele kudingeka wazi indlela yokwenza itiye Puer ukuthi akalilahlile izakhiwo yakhe ephulukisa ngempela.
AmaShayina itiye emcimbini ngesikhathi zithobele imithetho eyisisekelo ephathelene umbuzo zendlela yokwenza itiye Pu-erh. Asibi Chinese, kodwa thina sifuna ukuzwa ukunambitheka wangempela lesi siphuzo esimnandi, kufanele wenze lokho okudingekayo, okungenani ngokwezinga elithile.
Umthetho wokuqala ubizwa sebekubeke uyayilahla ukusetshenziswa kwanoma yiluphi uhlobo babe okokunandisa ukuthi ukuncisha itiye Puer ukunambitheka layo eliyingqayizivele, okwenza kube nje amnandi. Uma itiye eliphezulu ngempela, ushukela kudala umonakalo ongalungiseki, futhi ungazizwa zonke charm walesi siphuzo esiyingqayizivele. Nokuhlanzwa umzimba senzeka ngokugcwele ngaphandle kokusebenzisa okokunandisa, njengoba waziwa kabanzi kubantu - abalandeli ye indlela yokuphila enempilo.
Ukulandela umthetho wesibili, thola ingilazi noma china ngoba utshwala. Uma ufuna bese uyazama yimuphi omunye itiye, teapot ngebumba ngeke uvumele, ngoba uzobe ayegcwele ngokugcwele nephunga elimnandi lama-pu-erh. Indlela yenza itiye Puer itiye yevolumu esifanelana kangcono? Lapha kunokwehluka - uma inkampani encane - khetha teapot elincane bekhululiwe ngokushesha futhi kungenziwa isipikili up ingxenye fresh amanzi esizayo isikhathi esihle enye inkomishi isiphuzo esingenakuqhathaniswa. Futhi-ke, akunakusetshenziswa awukwazi ukusebenzisa noma iyiphi insipho ukuze bahlanze embizeni, nje hashaza ngamanzi futhi ivunyelwa ukuba yome. Indlela yenza itiye Puer ukujabulela ngokugcwele Singularity yayo? Yenza-ke ukusetshenziswa siqu izinkomishi esobala ezikuvumela ukubona emangalisayo ukugcwaliswa amanzi, umdlalo umbala bayo, unwinding amahlamvu itiye - umbono omuhle.
Ngokulinganayo, ngisho kuzibophezelo uhlobo amanzi owasebenzisayo. Ideal - ukusetshenziswa amanzi entwasahlobo, elihluziwe noma ayegcwele shungitnymi amatshe (ezibekwe amanzi ubusuku) amanzi, okuyinto kushintshwe okuthiwa "ukhiye elimhlophe" lapho abilayo isiqala nje - it is a "abasha" amanzi ashisayo, njengoba ibizwa abakhileyo ezindaweni zasezulwini. Uthuthuva itiye Puer, amanzi, yini lokushisa ukuyisebenzisa? Kuzoba eyanele yokulungisa kahle - kusukela 80º kuya ku-90 ° C.
Ukusetshenziswa Welding luyehluka kuye isibalo sabantu abazohlanganyela ku Tea Party, futhi, cishe, eyodwa kuya amathisipuni eyodwa nengxenye umuntu ngamunye. Ngaphambi ukusetshenziswa, amahlamvu itiye sihlanzwe agelezayo, ngaleyo ndlela ukukhulula kusukela uthuli kungenzeka.
Ngaphambi uthuthuva iketela ukufuthelana ngokuthela amanzi abilayo kuwo cool. Khona-ke ubeke amaqabunga tea ebhodweni, ugcwalise ngayo amanzi lwesithathu, elinde imizuzwana embalwa, amanzi akhanywa. Ngakho iketela waphoqeleka ukuba "ukuphefumula" futhi kuphela ngemva kokuba le misebenzi sibandulele, nengxenye yayo egcwele amanzi, kuye ngokuthi ibanga itiye, ukwenziwa edingekayo nenani lesikhathi (isilinganiso imizuzu kusukela 3 kuya 5).
Inombolo yokuphisa futhi kuncike izinhlobonhlobo itiye, kodwa ngokwesilinganiso izikhathi 4-7.
Ukugcina isikhathi eyabelwa Welding kuqala futhi okwalandela kuthinta iqophelo isiphuzo. Kufanele ngokuqinile waphawula ukugwema konakalisa ukunambitheka njengoba kungaba abe Ukuthoma. I itiye ukwenziwa ngemva kokuma isikhathi esingaphezu kwehora, ukusebenzisa akudingekile, tannins yakha ukufutheka, futhi liba yingozi. Kuyinto lo mthetho zivame kakhulu dengwane abakhileyo ezweni lethu, owakhombisa ngempumelelo ukusebenzisa amaqabunga tea, wema, hhayi ihora, nobusuku.
Uma unquma ukuzama itiye Pu-erh, ngisho nangokwengeziwe impilo yakho ngosizo - ukuqeda kulo mkhuba kanye qha kwenela. Phuza itiye fresh futhi okumnandi kuphela ezokwenza ugcoba ikhanda lakho iphunga futhi unike amandla angaphezu kuka ikhofi. Jabulela itiye lakho emndenini wakho nabangane!
Kanjani ukuze uzilungiselele isiphuzo kusukela Tarragon
Isiphuzo enempilo futhi esihlwabusayo - kvass
Indlela baphuze nogologo: ochwepheshe ukweluleka
Ihhotela Island View Resort (ex Sunrise Island View Resort 5)
"Stick Leqiniso": ukudlula. Ukudlula umdlalo Imfihlo "South Park: Stick Leqiniso"
Edolobheni elihle Bryansk esifundeni
"Ivan Gren" - umkhumbi omkhulu waseRussia umkhumbi weProjekthi 11711
Iyini incwadi ethi iphupho: Amacici aphupha ngomshado?
Gaz "izingulube": incazelo, imingcele lobuchwepheshe